USIQANI: LAHAANSHAHA SIDA UGU HORREEYA LOOGU TALAGALAY MAXKAMADAHA SOOMAALIDA EE MOGADISHU | allsaaxo online
USIQANI: LAHAANSHAHA SIDA UGU HORREEYA LOOGU TALAGALAY MAXKAMADAHA SOOMAALIDA EE MOGADISHU
Magaaladu waxay ku dhacdey xaalado deg-deg ah, waxay qaadataa isku-dhafnaan isku-dhafan, dhiirigelin iyo naxariis si ay uga jawaabto dhibaatada ka jirta magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Inkasta oo ay socoto isbedelka magaalooyinka, koox shaqaale tabarruc ah ayaa lugaynaya waddooyinka iyo habeenada Muqdisho iyo habeenkaba, diyaar u ah inay ka jawaabaan baaqyada lagu caawinayo marka ay jiraan xaalad degdeg ah oo halis ah.
“Shaqadeenu waxay leedahay nolol badbaadin iyo hanti. Waa arrin bini-aadannimo ah oo la sameeyo, “ayuu yiri Cabdiqani Maxamed Axmed Dhaloole, oo ah 30-jir madax ka ah waaxda dab damiska ee degmada Muqdisho oo madax ka ah kooxda 90ka xubnood ee howlaha gurmadka.
Qalinjabiyey Jaamacadda Hope ee Muqdisho oo ay ku leedahay shahaadada maamulka dawladda, Cabdiqani waxa uu la wareegay gacan-gelinta Waaxda Gaadiidka iyo Gurmadka ee Maamulka Gobolka Benaadir sannadkii hore. Wuxuu si dhakhso ah u dhigay himilada kor u qaadida kartida waaxda ee lagu maareeyo baahida degdegga ee magaalada.
“Adeegyadayada si xun ayaa loogu baahan yahay dadka Muqdisho oo sii kordhaya. Laba arrimood ayaa muhiim u ah bini-aadannimada: nolosha iyo hantida. Labadan waa in la ilaaliyaa, “ayuu yiri Cabdiqani.
Dalabaadka jira ee adeega kooxda kooxda badbaadinta dabka ee magaalada ayaa farriin milateri ah hadda. Intaa waxaa dheer, xubnaha kooxdu waxay maalin walba halis ugu jiraan inay u adeegaan dadweynaha ku nool qiyaas ahaan saddex milyan oo qof.
“Si aad u badbaadiso nolol, waa inaad marka hore ammaan ahaato. Si loo badbaadiyo nolol, dab-demiyayaashu waxay u baahan yihiin dhar daboolan oo buuxa koofiyadaha, gacmo gashi, kabaha iyo qalabka neefsashada. Tani waa inay ka hortagto khatarta ka imaan karta dabka, “ayuu yidhi Cabdiqani.
Cabdiqani oo dhashay Dhabarka Galkacyo ayaa ku biiray Waaxda Dabka iyo Gurmadka ee magaalada 2013-kii oo ah madaxa howlaha. Waxa uu qiray in dhacdooyinka dabka ee magaalada ay kor u kaceen ayna sababeen dhibaatooyin aan wali loo gaysan dad badan oo degan. “Celcelis ahaan, waxaan ka jawaabeynaa inta u dhaxeysa 15 iyo 20 gurmadka dabka,” ayuu yiri.
Markii uu noqday madaxa dabka ee magaalada 2017, Cabdiqani waxa uu qaaday talaabooyin dib-u-habeeyn ku sameeynaya wasaaradda iyo soo saaridda nidaamyo loogu talagalay hagaajinta adeegga magaalada. Dhaqdhaqaaqa ayaa isbedel wanaagsan sameeyay, sida uu sheegay Cabdiqani.
“Waxaan ku guuleysanay tababarka xubnaha kooxda. Waxaan hadda qorshaynaynaa inaan furno labo xarumo oo dab-demis ah sannadkan si aan u baahino adeegyadayada magaalada, “ayuu raaciyay
W/Q Journalist Mohamed Daacad